Biro laga dhex helay hilib digaag - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Biro laga dhex helay hilib digaag
La daabacay tisdag 7 juli 2015 kl 13.45
Shirkada hilibka digaaga ee Guldfågeln ayaa dib ugu soo celisay bakhaaradeeda ilaa iyo 10 000 bacood oo hilib digaaga ah ka dib markii biro laga helay qaar ka mid baakadaha ay shirkadu ku rido digaaga ay sammeyso.
Shirkadda ayaan garaneen bacaha digaag ee ku dhaceen biraha la hadal hayo sidaasi daraadeed ayay ku talineysaa in aan la cunin hilibka digaaga barafeysan ee shirkadaasi soo saartay inta u dhaxeysa 29-ka bishii ina dhaaftay ee Juun ilaa iyo 1-dii bishan aynu ku jirno ee Luulyo, sida lagu sheegay warsaxaafadeed ka soo baxay shirkadda.
Arrintan ayaa soo if baxady ka dib markii qof iibsaday hilibka digaaga ee shirkadda Guldfågeln uu ku dhex arkay biro hilibka digaaga dhexdiisa. Isla shirkadda qudheeda ayaa iyana biro ka dhex heshay digaaga baceysan oo aan weli suuq la geyn.
Macaamiisha iibsatay hilibka digaaga ee Guldfågeln ayaa lagu baraarujinayaa in ay isaha celiyaan hilibk digaaga halka ay markii hore ka iibsadeen ama ay la xiriiraan shirkada.